Hiiraan Archives - Page 3 of 4 - Sawirrotv
Dagaal Maalintii Sadexaad Galay oo ka Socda Magaalada Baledweyne (VIDEO)
May 19, 2016 – Wararka ka imaanaya Magaalada Baledweyne ee xarunta Gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in magaalada uu wali ka socdo dagaal maalintiisii sadexaad galay. Ciidamadaan ka tirsan Howlgalka AMISOM oo Saaka ku baxay dagaalkaasi in la joojiyo ayaa kala kulmay Waji gabax kadib markii Maleeshiyada dagaalamaya ay diideen in la soo kala dhex galo. Maamulka …
Dagaal Xoogan oo Saakay Dib uga Qaraxay Magaalada Baledweyne
May 18, 2016 – Wararka inaga soo gaaraya Magaalada Baledweyne ee xarunta Gobolka Hiiraan ayaa waxa ay sheegayaan in saaka dagaal xoogan kaga qarxay Xaafada Howlwadaag ee Magaaladaasi. Dagaalkan oo ah mid daba socda dagaal shalay ilaa xalay Magaaladaasi ku dhexmaraayay labo maleeshiyo beeleed ayaa wararka waxa ay sheegayaan in saaka mar kale uu dib kaga …
Cabdi Diiriye Darmaax oo Maanta lagu dilay Magaalada Baledweyne
April 23, 2016 – Wararka inaga soo gaaraya magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in maanta kooxo bistoolado ku hubeesan ay dileen Gudoomiyihii Xaafada Howl-Wadaag ee Magaalada Baladweyne, Marxuum Cabdi Diiriye Darmaax . Goobjoogayaal ayaa sheegay in kooxo bistoolado ku hubeesan ay dileen Gudoomiyaha xili uu xaafada Howl-Wadaag dhax lugeenayay isaga oon ilaalo wadan, …
Wasiirka Amniga iyo Kan Gudaha oo Gaaray Degmedda Buulo Burde ee Gobolka Hiiraan (SAWIRRO)
April 07, 2016 – Wasiirka Arimmha gudaha Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen (Odawaa) oo ay wehiliyeen Wasiirka Amniga Gudaha Mudane Cabdirisaaq Cumar Maxamed iyo xubno kale oo ka tirsan Wasaaradaha Arrimaha gudaha ayaa maanta gaaray Degmeda Buulo Burde. Markii ay gaareen garoonka degmeda Buula Burde ayaa waxaa halkaasi si diiran ugu soo dhaweeyay maamulka Degmada iyo qeybaha bulshada. Wafdiga …
Xildhibaan Goofdax Barre oo ka Qaybgalay Shirka ka Socda Magaalada Baledweyne (SAWIRRO)
April 07, 2016 – Waxaa magaalada Baladweyne Gaaray Xildhibaan C/laahi Goodax Barre oo xubin ka ah Baarlamaanka Dowladda Federaalka ee Soomaaliya, wuxuuna islamarkiiba gaaray xatunta lagu kulansanyahay, isagoo halkaasi kaga qaybgalay shirka dib u heshiisiineed ee beelaha degga Gobolkaasi uga soconaya magaalada Baledweyne ee caasimadda Gobolka Hiiraan. Xildhibaan C/laahi Goodax Barre ayaa wuxuu bogaadiyay shirka ay soo …
Ciidamada Jabuuti oo Hawlgallo ka Fuliyay Deegaano ku Xeeran Degmada Jalalaqsi (SAWIRRO)
April 04, 2016 – Ciidamada Nabad ilaalinta Midowga Africa ee (Amisom) aaga ciidamada Jabuuti ayaa waxa ay howlgalo ammaanka lagu xaqiijinaayay ka Fuliyeen deegaano hoostagga Degmada Jalalaqsi ee Gobolka Hiiraan. Howlgalkan ayaa ciidamada waxa ay ka sameeyeen Deeganada kala ah Cariishley, Birbira, Quracjafley, Moowjimbiley iyo deegaano kale oo qiyaasti in ka badan 10km dhanka galbed kaga beegan …
DAAWO: Wabiga Shabeele oo Biyo Lagu Diirsaday Keenay (VIDEO)
April 04, 2016 – Biyihii Wabiga Shabeele oo ay Maalmihii dambe soo baxayeen Warar sheegaya in Wabiga Shabelle oo mara Gobolo badan qeybo ka mid ah ay Xirtay Dowladda Itoobiya ayaa waxaa hadda soo laabtay Biyihii Wabiga. Qeybo badan oo ka mid ah Gobolada Shabellaha Hoose, Shabellaha Dhexe iyo Hiiraan ayaa waxaa lagu Arkay Biyaha Wabiga oo …
Madaxweynaha oo Soo Dhaweeyay Odoyaasha Ka Qaybgalaya Shirka Maamul u Samaynta Hiiraan (SAWIRRO)
March 27, 2016 – Madaxweynaha Jamhuriyadda Federaalka ee Soomaaliya, Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa soo dhoweeyay go’aanka ay maanta magaalada Beled Weyne kaga dhawaaqeen ilaa toddoba beelood oo ka mid ah beelaha gobolka Hiiraan oo oggolaaday inay dib ugu biiraan shirka ka socda magaalada Jowhar ee maamulka loogu dhisayo gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe. Madaxweynaha ayaa …
Banaabax Maanta ka Dhacay Magaalada Baladweyne ee Xarunta Gobolka Hiiraan (VIDEO)
March 26, 2016 – Waxaa maanta magaalada Baladweyne ka dhacay Bannabax ay dhigeen Dhalinyaro ka soo hor jeeday shirka ka socda magaalada Baledweyne. Ciidamada Dowladda Federalka Somaliya ayaa Magaalada Baledweyne waxa ay kala cayriyeen dad isku soo bax ka dhigayay Magaalada, kuwaasi oo ka soo horjeeday Shirka Maamul u sameynta Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe. Ciidamada ayaa …
Kulankii Ra’iisul Wasaaraha iyo Odoyaasha Dhaqanka Hiiraan oo lagu kala Dareeray (SAWIIRO)
March 23, 2016 – Kulan maanta Magaalada Baledweyne ku dhex maray Odayaasha Golaha Dhaqanka Beesha Xawaadle iyo Ra’iisal Wasaaraha Soomaaliya mudane, Cumar C/rashiid Cali Sharmaarke, ayaa is af-garan waa ku so dhamaaday, kadib markii la’isku khilaafay qodobadii miiska saarnaa. Garabka Ra’iisal Wasaaraha, ayaa madasha la yimid baaq ah in Odayaasha Beesha Xawaadle, ay ka qaybgalaan shirka …